Ciidamo isku dhaf ah oo maanta lagu wareejiyey Amniga magaalada Garoowe – Radio Baidoa
Ciidamo isku dhaf ah oo maanta lagu wareejiyey Amniga magaalada Garoowe
Magaalada Garoowe ee Xarunta Gobolka Nugaal waxaa Maanta kulan xasaasi ahaa ku yeeshay Guddiga Nabad-gelyada gobolka Nugaal, iyaga oo kulankooda uga hadlay xaalada amni ee Gobolka.
Maamulka Gobolka Nugaal ee Puntland ayaa Kulanka kaga dhawaaqay in Maanta oo Isniin ah Amniga Magaalada Garoowe si KMG ah loogu wareejiyey Ciidamo isku dhaf ah oo ka socda kuwa PMPF, PSF iyo ciidanka madaxtooyada Puntland.
Guddiga Nabadgelyada Gobolka Nugaal ayaa waxaa ay sheegeen in Ciidanka Booliiska gobolka Nugaal ay haatan ku wadaan dib u habeyn,isla markaana taasi ay keentay inay Amniga Garoowe ku wareejiyaan Ciidamo Boolis ah.
Sidoo kale Guddiga ayaa shirkooda waxaa ay ku go’aamiyeen in Baraha koontorool ee laga soo galo Magaalada Garoowe si deg deg ah loo geeyo Ciidamo ka socda PSF, PMPF iyo ciidanka madaxtooyada, isla markaana la geeyo halka loo asteeyey.
Ugu dambeyn Guddiga ayaa shirkooda ku sheegay inay siwedajir ah ula dagaalami doonaan dadka amni-darrada ka wada gudaha Magaalada,sida kuwa Magaalada Hubka soo geliya iyo kuwa isticmaala ama ka ganacsada maan-dooriyaha Khamriga iyo Xashiishka.
Ciidamo looga tala galey ilaalinta amniga doorashada soomaaliya laga keenay dalka Nigeria
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo isugu yeerey Saraakiisha Hay’adaha Amniga